Himilada6: Xal La Gaadhi Karo, La Beddeli Karo, Xallinta Qalabaynta Suuqgeynta Shirkadaha | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 21, 2016 Douglas Karr
Shirkadda ugu weyn ee suuqgeynta iimaylka Australia ayaa hadda ku sii fideysa Mareykanka, iyadoo siineysa shirkado iyo wakaalado suuqa dhexdiisa ah suuq geyn heer sare ah oo la qaabeyn karo, qiimo jaban. Vision6 waa xal otomaatig ah suuq geynta suuq geynta suuq geynta iyo wakaaladaha. Himilo6 wuxuu dhexgaliyaa otomaatiga emaylka, SMS, foomamka iyo warbaahinta bulshada qaab fudud oo loo adeegsado.
Kumanaan wakaaladaha dhijitaalka ah oo ay ka mid yihiin Clemenger BBDO Australia, iyo sidoo kale kooxaha suuqgeynta gudaha ee shirkadaha ay ka mid yihiin Audi Sydney, BMW Brisbane, Royal Society for Prevention of Cruelty of Animals (RSPCA) iyo waaxyo badan oo dowladda ka tirsan, waxay ku tiirsan yihiin Vision6 si ay u bartilmaameedsadaan dhagaystayaashooda iyagoo leh casriyeyn, emayllo kala jaad ah oo ay kiciyeen falalka macaamiisha.
Suuqgeynta Emailka ayaa leh ROI-da ugu sarreysa kanaal kasta oo suuq-geyn ah, iyo ganacsiyada waxqabadka sare leh waxay dalbanayaan barxad fudud, laakiin la awoodi karo Tani waxay u horseedday suuqa Mareykanka inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu tartamaya bixiyeyaasha xalka suuqgeynta, gaar ahaan sannadihii la soo dhaafay. Waxaan ku faraxsanahay inaan keeno mid ka mid ah kuwa ugu macquulsan, xalka isticmaalaha udub dhexaadka ah ee laga heli karo suuqa Mareykanka. Mathew Myers, aasaaska himilada6
Astaamaha otomatiga ee Suuqgeynta Vision6
Is-gaarsiinta Email ee Sare - Turbo waxay ka qaaddaa jiilkaaga hogaaminta adoo dejinaya emayl ololeyn ah oo loogu talagalay in loogu beddelo hogaamiyaasha macaamiisha lacag bixinta. Abuur qulqulka shaqada ee emayllada shaqsi ahaan iswada.
Jiid iyo Tifatiraha Tifatiraha - Abuur oo wax ka beddel emayllada xirfadleyda raadinaya adigoo gujinaya guji fudud. Waa habka cadaadiska-xorta ah ee qaabeynta qaab-dhismeedka.
Template saaxiibtinimo Mobil - Xullo shaashad qaab-dhismeed HTML jawaab-celin leh oo sifiican ugu eg aalad kasta.
Mawduuc firfircoon - Ku hagaaji natiijooyinka emaylkaaga adoo habayn ka dhigaya waxyaabaha ku jira iimaylkaaga oo adeegsanaya sifooyinkaaga xogta. Aragtida 'xaashiyaha' ee 'Vision6' waxay ka dhigaysaa kala-soocidda xogta neecaw.
Imtixaanka emaylka - Waxaa ku shaqeeya Litmus, tijaabi oo fiiri e-maylkaaga in ka badan 45 sanduuqyo oo naso fudeyd, adigoo og inay fiicnaan doonto.
Foomamka Internetka - Ku dar foomam boggaaga iyo warbaahinta bulshada oo bilow bilawga ururinta jihooyinka. Si fudud u sameys foomamka shabakadda si aad ugu dhigantaa sumaddaada. Tifatiraha Vision6 ayaa sahlaya in lagu daro sawirada lana qaabeeyo foomamka si loo waafajiyo baahiyahaaga.
Isdhexgalka - Si fudud otomaatiga shaqooyinka adoo adeegsanaya iskudhafka. Ku xir suuqgeynta emailkaaga boqolaal codsiyo ay ka mid yihiin Google Analytics, WordPress iyo Facebook.
Warbixinta Isdhexgalka iyo Guji Khariidadaha - Warbixinno muuqaal ah oo faahfaahsan ayaa bixiya aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan habdhaqanka macaamiishaada. U fiirso natiijooyinka ololeyaasha emaylkaaga oo si toos ah u socda oo arag cidda ka akhrinaysa emaylladaada kumbuyuutarka dusha sare iyo kan moobiilka.
Saxiix Bilaash ah adigoo wata Vision6
Tags: jiid oo hoos u dhig tifaftiraha emaylkaku soo dir waxyaabaha ku jira firfircoonimtixaanka emaylkaFacebookAnalytics googleliifsuuq-geynta suuqaaragti6WordPress